Kitapo fonosana maimaim-poana avo lenta | Famoronana an-tserasera
La fandefasana soratra Iray amin'ireo lahasa mahaliana indrindra azontsika atao izany. Iray amin'ireo fiantraikany izay anehoana ny kalitao sy ny fahaiza-mamorona an'ny mpamorona sary sy photomanipulator. Soa ihany, manana andiana fitaovana hanamora ny asantsika izahay. Ny borosy amin'ity karazana asa ity dia tena zava-dehibe ary mety ho singa mahatonga ny fahasamihafana eo amin'ny asa tanterahina. Androany aho te-hizara aminareo fonosana borosy feno faran'izay tsara sy avo lenta, tonga lafatra azo ampiharina grunge na surreal kompositions ary singa sarotra, toy ny rindrina na hazo. Izy ireo koa dia mety ho tena mahaliana amin'ny famoronana effets miavaka amin'ny endrik'ireo toetrantsika amin'ny alàlan'ny sarontava. Tena malalaka ny fahafaha-manao, manana isan-karazany ny fahafaha-mamorona. Miankina amin'izay tianao ahatongavana izany!
Amin'izao fotoana izao dia avelako eto ity fonosana manaraka ity izay maimaimpoana tanteraka ary manana fomba sivy faran'izay tena azo antenaina amin'ireo triatra sy vaky ireo. Afaka mahita izany ianao Ao amin'ity rohy manaraka ity amin'ny endrika voafintina. Raha misy olana rehefa miditra amin'ny atiny ianao dia mila mamela anay hevitra etsy ambany fotsiny. Ireto ny santionan'ny borosy tsirairay izay tafiditra ao anaty fonosana. Tsy misy intsony ny milaza, Manantena aho fa mankafy azy ireo ianao ary hahazo fampisehoana avo lenta amin'izy ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » borosy » Fonosana borosy maimaim-poana avo lenta
Tsy azoko atao ny misintona azy ????
Eny, ny rohy dia hitondra anao any Deviantart ary ao no hahitanao ny bokotra fampidinana eo amin'ny sisiny ankavanan'ny pejy. Mirary ny soa indrindra!
Izao eny, Misaotra !!!